Waamichaa deggeresa ummata Oromoo fi Mootummaa Ethiopiaf.
Wa'ee Waraanaa ABO duran, Namoota hidha turan, qabsa'oota qabsoo irra jiran, namoota umuri gutuu qabsoo keessa turani akka boqotan godhaman, namoota kayyoo Oromoo qulquuluf dhabbata hunda waliti qabun akka biyya galan gochun dirqama. Kana kooren tecnical group ABO fi Mootummaan Ethiopia waligalte gochuuf deeman sana keessaatti siirriti wa'ee qabsa'oota, waraana, dabbaleen fi Ogantoon qabsoo keessaa turan Eritrea, Egypt, Sudan, Yeman, Uganda, Kenya, Somalia, Djibout , Europe, USA, biyoota Araba kkf jiran kana biyyaati deebi'ani ijjarsa biyyaa irratti akka hojeetan haalaa mijeesu qabu. Qabsa'oon kun baroota dheeraaf warra jiruf jireenya isaan qabsoo Oromoof warreegan dha. Mootummaa fi ummatni wa'ee lammiwaan kana deebisan ijjaruu irratti dirqama waloo qabu.
Lammiin Oromoo biyya ala fi biyya keessa ammoo humna gudda kana biyyatti deebsuuf waan danda’uu hundan ABO garggaru qaba. ABOn qoofa isaa miti Mootummaa Ethiopia waliin iyuu namoota kana biyyatti deebisuf humna gudda gaafata deggersa Addunya ilee IOM fi UN ilee ni gaafata. Nama wagaa 40 oli ala ture miti namni wagaa 2f ilee qee’ee isaa irraa buqa’ee deebisun waan cimmadha.
Namni hundi Waraana, Qabsa'oota diiree jiran, midhamtoota qabsaoo fi hidhamtoota Oromoo rakko baqatani jiran, Oganoota Qabsoo Oromoo kkf akka biyyatti deebi'anfi deeggersa malaaqa gochu, namni qabsoo Oromoof guyya tokko ilee beela’ee akka bakeeti hafee hamileen isaa hin xuuqamne gochudhan dirqama keenya haa ba’aanu.
Moomummaan Oromiyyasi kara isaa namoota umurii isaan gutuu qabsoo irra turan fira fi maatii isaan diigan aduu fi bokka keessa wagaa 40 ol jiratan kana deebisan bakka isaanf malu bakka isaan itti gaafatamuma isaan ba’aachun Oromiyya ijjaruu keessatti guumacha akka godhanf ija obboolumma dhugan ilaalan simachu bakka kenufin walidhabde dura turte hundi akka dagatame fulla tokkon hojii Oromiyya fi Oromoo akka hojeetan waan godhuuf Mootumman Oromiyya fi Mootumman federaala dhimma kanaaf furmata garii keenun rakko nu giddu jiru hundaf furmata ta’aa.
Qabsa’oota Oromoo ija waliiqixeen ilaalun tokkuma ijaracha jiru cimsa!!!